Top 5 maka Screencasting na Linux | Site na Linux
Top 5 maka Screencasting na Linux
Gerak | | GNU / Linux, Na-atụ aro
Ihu nyocha ihu ọma mejupụtara dekọọ ihe niile na - eme na kọmputa gị, na nke ahụ nwere ike ịgụnye akụkọ na ọdịyo.
Na ụwa nke nkuzi vidio, ihe ntanetị ahụ dị oke mkpa, ọ bụ ezie na ọ bara uru n'ọtụtụ oge ndị ọzọ mgbe ọ dị mkpa ịnwe ndekọ zuru ezu nke desktọọpụ gị, ma ọ ga-eweta ọrụ, kọọ ọdịda ma ọ bụ nyochaa arụmọrụ nke Mmemme . Screencasting mejupụtara na-ewere usoro nke ihuenyo ka ịdekọ omume nke onye ọrụ, si otú ahụ na -emepụta vidiyo vidiyo n'okpuru otu usoro.
Agbanyeghị, n'ihi na mgbe ọ dị mkpa, ebe a bụ 5 uzo ozo ka screencast si Linux:
2 Dekọọ desktọọpụ m
3 Ihuenyo Voko
4 Mfe ihuenyo edekọ
Maka ndị na-ahọrọ ịrụ ọrụ site na iwu iwu, ffmpeg i nwere nhọrọ nke screencasting. Site na ffmpeg ị nwere ike idekọ desktọpụ gị site na ịme usoro ndị a:
-f na-egosi usoro.
-s na-egosi mkpebi
-r na-egosi fps.
-i na-egosi "faịlụ ntinye", na nke a, ihuenyo ahụ.
Iji kwụsị ndekọ, pịa CTRL + C na ọnụ.
Dekọọ desktọọpụ m
Ọ bụ otu n'ime mmemme nyocha mbụ emere na Linux, ọ bụrụ na ọ bụghị nke mbụ. Ya interface bụ nnọọ mfe ma kensinammuo, ezigbo maka na-eme ka a isi ọdịyo na video ndekọ. Ọ nwere ngwaọrụ, maka nhọrọ windo ma ọ bụ mpaghara ndekọ, nhazi ọdịyo na vidiyo. Ọ bụ ezie na ọ nweghị njide ihuenyo ma ọ bụ ndekọ ndekọ. Ọ bụ mmemme site na afọ ole na ole gara aga, ọ nweghịkwa onye nrụpụta ewerela ọrụ ahụ iji tinyekwuo ọrụ. Eziokwu bụ na ọbụna ụdị ya 0.3.8.1 na-aga nke ọma, ọ na-agbaso ihe niile ọ na-enye.
Nwere ike ịchọta ya na nchekwa Linux, ụdị sitere na iwu iwu CLI ma ọ bụ ụdị GTK eserese. Yabụ ị nwere ike iwunye GTK, na - agba ọsọ:
sudo apt-nweta wtt-recordmydesktop
Otu ọzọ maka ndepụta ahụ, ngwá ọrụ ọzọ dị mma iji dee ihe niile na-eme na desktọọpụ gị. Na otu njirimara dị ka ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọghọm bụ na ọ naghị enye gị ohere iwe nseta ihuenyo. Njikọ ya nwere ike iyi ihe na-adịghị mma, mana ọ na-eme ka ọ dị mfe mgbe ị na-eji ya.
Nwere ike ịchọta ya na nchekwa, na-agba ọsọ:
sudo apt-nweta ngwa vokoscreen
Mfe ihuenyo edekọ
Ọ bụ otu n'ime mmemme kachasị dị mfe ma sie ike maka nyocha, ọ nwere nnukwu atụmatụ na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ ịdekọ desktọọpụ gị ma ọ bụ wepụ screenshots. Dị ka ndị ọzọ, ọ na-enye ohere ndekọ nke ihuenyo zuru ezu, nke naanị windo ma ọ bụ naanị otu akụkụ nke desktọọpụ, na mgbakwunye na ịkọwa isi iyi nke ụda, okwu ma ọ bụ igwe okwu. Ọ nwere ike ịbelata ọnụego ya iji gbaa ọsọ na kọmputa nwayọ na-enweghị ida mmekọrịta n'etiti vidiyo na ọdịyo.
Iji wụnye ya, a naghị ahụ ndekọ ederede dị mfe na nchekwa, yabụ anyị ga-ebu ụzọ tinye PPA ma melite
sudo apt-get-repository ppa: maarten-beart / simplescreenrecorder sudo apt-nweta melite sudo apt-wụnye simplescreenrecorder
Ọ bụ otu n'ime ihe ngwọta kachasị dị na ihu igwe na Linux. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ na-eme ka ọ bụrụ desktọpụ desktọọpụ zuru oke. Na nhazi vidiyo ya, anyị nwere ike ịkọwapụta usoro mmepụta, MP4, WEBM, AVI. Banyere ọdịyo, Kazam na-enye gị ohere ịkọwapụta ụdị ụda a na-edekọ, nke ndị ọkà okwu, ma ọ bụ igwe okwu. N'aka nke ya, o nwekwara ikike ihie ihuenyo, windo, ma ọ bụ akụkụ nke desktọọpụ.
Kazam nọkwa na nchekwa ego, yabụ na agba ọsọ
sudo apt-nweta wụnye kazam
A ka nwere ọtụtụ softwares maka nyocha ihuenyo na Linux. Lee naanị m tinyere 5 na-aga nke ọma. Ugbu a, ọ ka ga-anwale nke kachasị mma maka gị ma bido ndekọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Top 5 maka Screencasting na Linux
I chefuru nhọrọ kachasị mma na nke ahụ bụ iji GNOME site na ịpị igodo * ctrl alt shift r *.
tupu xvidcam adikwa
Frank Yznardi Davila dijo
Nke na otu onye nwere ike arụnyere na njiko?
Zaghachi Frank Yznardi Davila
Ha chefuru VLC. Ọ na-akwado screencast na ọdịyo. Emere m vidiyo nke desktọọpụ m maka bouquet na VLC ma ọ dị mma.
Leave na-ahapụ OBS.
I butere m ụzọ:
Felipe Uribe Aristizabal dijo
Kazam na-amasị m, ma ọ bụrụ na ị tinye ya na mp4, ma họrọ ndekọ ebe njedebe, ọ ga-echekwa vidiyo ahụ na akpaaka, jiri nke a chekwaa oge ọ ga-ewe maka usoro ndị ọzọ iji mepụta vidiyo ahụ. Otu ihe bara uru nke nwere ike ịmasị gị bụ igosi igodo ejiri na ihuenyo (Screenkey). Cheers
Zaghachi Felipe Uribe Aristizabal
Onwere onye nwere ike mbugharị mgbe a na-enyocha ihe nyocha?
Ezigbo ajụjụ, kedu nke mmemme a ga - enyere gị aka mbugharị
Zaghachi na dogotopo
Sọftụwia kacha mma maka ịlele bụ OBS Studio (ọbụghị n'efu ma dịkwa mma) https://obsproject.com/index
Site na ihe m na-ahụ ma ọ bụ n'efu, o nwere ikikere GPL2.
Open Broadcaster Software bụ sọftụwia mepere emepe ma mepere emepe maka vidiyo vidiyo na gụgharia ndụ.
Manuel Alcocer ebe obibi oyiyi dijo
Maka m ihe kacha mma bụ: SimpleScreenRecorder
Zaghachi Manuel Alcocer
Leonardo Colmenares kwuru dijo
Ihe omume ndị a ọ bụla na-enye gị ohere idezi vidiyo ahụ emesia, dịka ọmụmaatụ iji wepu ma ọ bụ tinye ọdịyo, onyonyo, aha, mbugharị, wdg.
Zaghachi Leonardo Colmenares
Vokoscreen na-enye gị ohere imeghe vidiyo ahụ na nchịkọta vidiyo, ma dekọọ ya na kamera weebụ na ihuenyo n'otu oge, ọ bụ ọkacha mmasị m maka ịdị mfe ya na arụmọrụ ya.
Zaghachi Manuel Serrano
Iji tinye ebe nchekwa ị ga - eme:
$ sudo tinye-…
(lee Simple Screen edekọ)
Ekele sitere na Malaga.
Zaghachi na ROMSAT
Ugochukwu David dijo
Nnukwu ọkwa, naanị ihe m na-achọ m ga-emeso Kazam, ekele
Zaghachi David Dominguez
Daalụ maka ntụgharị, ana m eji Kazam ọ na arụ ọrụ ọfụma.
Miguel: 67 dijo
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịkwado Vokoscreen, mụ na ndị ọzọ na-anwale izu ole na ole dịka RecordMyDesktop (ma ọ dị nwayọ nwayọ) ma ọ bụ VLC (nke anaghị edekọ ụda ahụ n'ụzọ ọ bụla)
ma na Vokoscreen ihe na-aga nke ọma
Zaghachi Miguel: 67
Otu esi eme ngwa Apache na Pagespeed
Breeki aka: Rip, transcoder vidiyo na obere ihe ndị ọzọ